Kuyini ukunakekelwa komphakathi nezempilo | Ukwakheka nezifundo
UMaria Jose Roldan | 27/08/2021 15:52 | Kubuyekezwe ku- 27/08/2021 15:54 | Ukuphuma Komsebenzi
Inani labantu liguga ngokweqa nangemingcele futhi Yingakho umsebenzi onjengokunakekelwa kwezempilo kwezenhlalo ukhula. Kunesidingo sangempela sochwepheshe abahle abakwaziyo ukunakekela nokusiza abantu okuthi, ngenxa yeminyaka yabo, bangabe besakwazi ukuzondla.
Ukuba khona kochwepheshe abathuthukisa umsebenzi onjalo kubalulekile uma kuziwa ukukwazi ukuhlinzeka ngempilo engcono kulaba bantu abathembele futhi asebekhulile.
1 Kuyini ukunakekelwa kwezempilo komphakathi?
2 Yimiphi imisebenzi umuntu osebenzisa ukunakekelwa kwezempilo kwezenhlalo anayo
3 Yimaphi amathuba emisebenzi isikhundla sokunakekelwa kwezempilo yomphakathi esinaso?
4 Uyini umholo wochwepheshe bezokunakekelwa kwezempilo
5 Amakhono umuntu ozinikezela ekunakekelweni kwezempilo kumele abe nawo
Kuyini ukunakekelwa kwezempilo komphakathi?
Lokhu kunakekelwa akulutho ngaphandle kokunakekelwa okwenziwa ngumuntu, ngesikhathi sokukwazi ukwanelisa izidingo ezahlukene abantu abangazinakekeli abangaba nazo. Lokhu kunakekelwa kuyadingeka ngoba abantu abanjalo bancike futhi balahlekelwe ukuzimela kwabo. Bangaba sebekhulile noma babe nezinga elithile lokukhubazeka.
Yimiphi imisebenzi umuntu osebenzisa ukunakekelwa kwezempilo kwezenhlalo anayo
Umsebenzi oyinhloko womuntu owenza lo msebenzi, Kungukuthuthukisa ikhwalithi yempilo yalowo oncikile kuye nokwenza konke kube lula kakhulu. Ngandlela thile, umsizi wezempilo yezenhlalakahle unemisebenzi elandelayo:
Inesibopho sokugcina umuntu othembekile ehlanzekile ngokuphelele ngaphezu kokumfunza noma ukumsiza ukuzikhulula.
Unolwazi lobuhlengikazi nganoma yiluphi usizo umuntu othembekile angaludinga.
Yenza ukusekelwa kohlobo ngokomzimba noma ngokwengqondo.
Hambisa noma thwala umabhalane aye endaweni ethile lapho kunesidingo.
Yimaphi amathuba emisebenzi isikhundla sokunakekelwa kwezempilo yomphakathi esinaso?
Umuntu onquma ukuzinikela ekubeni ngumsizi wezempilo yomphakathi imvamisa inamathuba amabili emisebenzi:
Eyokuqala iqukethe ukusebenza ezikhungweni zenhlalo ezifana nezindawo zokuhlala abantu abadala noma ezindlini ezivikelekile, unakekele abantu abathembele futhi babe nohlobo oluthile lokukhubazeka, kungaba ngokomzimba noma ngokwengqondo.
Unganikela futhi izinsizakalo zakho zasekhaya ngendlela ethile futhi ethize, ukwenza impilo ibe lula kubantu abalahlekelwe ukuzimela emisebenzini yabo yansuku zonke.
Uyini umholo wochwepheshe bezokunakekelwa kwezempilo
Uma kukhulunywa ngokwazi umholo womsizi wezokunakekelwa kwezempilo, kufanele wazi ukuthi ngabe umsebenzi wakho ungena ngaphansi komkhakha womphakathi noma wangasese. Iminyaka yesipiliyoni nayo inethonya elihle emholweni. Into ejwayelekile ukuthi umsizi wezokunakekelwa kwezempilo uhola cishe ama-euro ayi-15.000 ngonyaka.
Amakhono umuntu ozinikezela ekunakekelweni kwezempilo kumele abe nawo
Akuwona wonke umuntu okufanele akwenze lo msebenzi ngoba kufanele ube nekhono kanye nozwela lapho unakekela abantu abathembele kuye. Ngaphandle kwalokho, Umuntu kufanele abe nochungechunge lwamakhono noma amanani okufanele aqokonyiswe:
Isimo sengqondo emsebenzini kufanele kube okuhle ngangokunokwenzeka ukuze imiphumela ifiseleke.
Inani elingenakuntuleka kumuntu owenza lolu hlobo lomsebenzi ukuhlonipha amakhasimende abo. Uchwepheshe kumele futhi ahloniphe amasiko nemikhuba yabantu obasebenzelayo.
Ngaphandle kwalokho, kuhle ukuthi lowo muntu okukhulunywa ngaye unamakhono amaningana okuxhumana nomphakathi ezenza umsebenzi wenziwe ngempumelelo kakhulu:
Kubalulekile ukuthi ushayele ngokuphelele zombili ulimi olukhulunywayo nolungeyona inkulumo.
Yamukela zonke izinhlobo zokugxekwa ukukhula kulowo msebenzi.
Kuhle ukuthi uyakwazi ukulalela ukuze ubudlelwane nekhasimende buhle kakhulu.
Luhlobo lomsebenzi oludinga futhi ukuzola, ukubekezela nokuthula ngesikhathi sokwenza imisebenzi ehlukile.
Kunjalo, inani elifana nozwela alikwazi ukulahleka. Ukunakekelwa kwezempilo kwezenhlalakahle kudinga ukuthi uchwepheshe akwazi ukuzibeka kalula esikhunjeni seklayenti lakhe futhi akwazi ukuxazulula izinkinga ezahlukahlukene ngendlela esheshayo nephumelelayo.
Ngamafuphi, uma uthanda ukusiza abanye ikakhulukazi uma banezinkinga zokuncika, ukunakekelwa kwezenhlalakahle nezempilo ngokungangabazeki kungumsebenzi wakho. Ngaphezu kwalokhu, njengoba sesishilo ngenhla, ngumsebenzi odingeka kakhulu ngenxa yenani labantu abathembele abatholakala emphakathini.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » Izifundo » Ukuphuma Komsebenzi » Kuyini ukunakekelwa kwezempilo komphakathi
Kuyini ukuphathwa kwenqubo?